Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Shirkii ugu weynaa ee Deegaanka oo Jijiga kasocda
Shirkii ugu weynaa ee Deegaanka oo Jijiga kasocda
November 19, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL:Waxaa maalmahan magaalada Jijiga kasocda shirkii ay isugu yimaaddaan dadkii ugu badnaa ayna kasoo qaybgaleen dal iyo dibad joog iyo waliba xukuumadda DDSI looguna magacdaray shirka wadatashiga dawladda iyo shacabka.
Shirkan oo maalmahan kasocday caasimadda Jijiga ayaa waxaa lagu soo bandhigayay warbixino kala duwan kuwaasoo dhamaantood diiradda saarayay dhibaatooyinka nabad xumida iyo gaar ahaan dhibaatooyin lagu eedeeyey iney kadanbeeyeen Kooxda Asmara. Dad badan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur agoon ah iyo kuwa lixaadkoodii waayay ayaa dadka hortooda ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay sheegeen iney soo gaadhsiiyeen kooxda Asmara iyadoo si goosgoos ahna ay suugaanta deegaanku uga dhexmuuqato shirkaas.
Dadkii shirka ka qaybgalayay qaar badan oo kamid ah ayaa miyir daboolmey iyadoo qaarbadanna ay oohinta ceshan waayeen markii laga sheekeeyey dhibaatooyinka badan ee dhamaantood dusha laga saarey kooxda Asmara.
Dhanka kale waxaa shirka dadka soo hor istaagey kuwa isku sheegey iney iyagu gesyteen waxyeelooyinkaas lagu eedeeyey oo noocyo kala duwan lahaa. Shirka waxaa ka hadley odayo, aqoonyahano, dumar iyo masuuliyiinta Deegaanka iyadoo sidoo kalena ay ka hadleen caruur badan oo agoon ah.
Shirkan oo wali socda ayaa loo fasiran karaa inuu yahay mid looga danleeyahay in dagaal maskaxeed iyo af ah lagu qaado Kooxda Asmara mar hadii dhankii addinka iyo awoodda ciidan ay yaraatey.